‘रित्तो पेट रित्तै हुनेभैग्या’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘क्या गर्नु त भाउवा ! विकास त भयो तर धनीहरूका लागि । बाटो बन्यो । गाडी गुड्न थाल्यो । अहिले काम पाइँदैन, कामै नभएपछि रित्तो पेट रित्तै हुनेभैग्या । धेरै मान्ठले गर्ने काम एउटै गाडीले एकैछिनमा गरिदिन्छ । आफ्नो खेतमा फलेको अन्नले खाना पुग्दैन ।’
भाद्र १३, २०७७ कुन्साङ
बिहानको एघार बजेको थियो । घाम उदाएको थिएन । यस्तो लाग्थ्यो– बादलको बर्को ओढेर घाम कतै चुपचाप निदाइरहेको छ । पैंतालीस मिनेटअघि नेपालगन्जको बाफिदो गर्मी चंखेली हिमाल काट्नेबितिकै सेलाइगयो । चंखेली हिमाल पुग्नेबितिकै जहाजभित्रै सर्र बहने चिसो हावाले भनेझैं लाग्छ– वेलकम टु हुम्ला !
ह्योम्बु (काठमाडौं) पसेको ६ वर्ष भयो । यो ६ वर्षको अन्तरालमा जम्मा दुईपटक हुम्ला जान पाएँ । हुन त जहाजमा बसेको केही मिनेटमै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगिन्छ । त्यहाँबाट पाँच घण्टा हिँडेपछि आफ्नै गाउँघर पुग्छु । दिनरात गाडीमा लामो यात्रा गर्नुपरेन । तर, बादल माथि–माथिबाट उडेर पटक–पटक हुम्ला गइरहन भनेजस्तो सजिलो पनि त छैन ।
खैर, जसो–तसो गरेर म हुम्ला आइपुगें । झोला थन्क्याएर सिमकोट बजार डुल्न निस्किएँ । उही चिने–चिनेजस्तो लाग्ने मान्ठाहरू थिए । रित्तो थैलो काखी च्यापेर चामल निकाल्न खाद्य संस्थानतिर दौडिनेहरूको हतारो उस्तै थियो । खाद्य संस्थानअघिको भीड त्यस्तै । डोकोमा साग, स्याउ, आरू र दाउरा बेच्नेहरूको जाँगरिलो आवाज पनि उस्तै सुनिन्थ्यो ।
तर, अहिलेको सिमकोट दुई वर्षअघिको भन्दा निकै फरक भइसकेको छ । पहिला यही बाटोमा दाउरा बोकेका गधा, घोडा, जोपा, तोल्व र खच्चडहरूको लस्कर देखिन्थ्यो । अहिले धूलो, धूवाँ उडाउँदै केही गाडीहरू गुडिरहेका छन् । ढुंगा, दाउरा र सामान ओसार्ने खच्चडमध्ये लम (सुरुमा हिँड्ने) को घाँटीमा झुन्डिएको करङ, लिङ्स्याङ र ठिलु (घण्टी) को मिठो धुनसँगै सहर ब्युँझिन्थ्यो । लमको निधारमा टाँसिएको सानो ऐना परबाटै टलक्कै टल्किन्थ्यो– जस्तो टाक्तेल हिमालको चुचुरोमा घाम लाग्दा हिउँ टल्किन्छ । हिउँदमा मान्ठाहरू बाटो छेउछाउमा बसेर सुल्पा तान्दै घाम ताप्थे, गाला मार्थे (गफ गर्थे) । ठट्टा गर्नेहरू ठट्यौली पारामा हिउँको डल्लो बनाएर एकअर्कालाई हानाहान गरेर रमाइलो गर्थे । बैकिनी (आइमाई) हरू यही बाटोमा बसेर घाम ताप्दै ओखर फुटाउँथे, ताको (धागो) काढ्थे, छोछोरीहरू बाटोमै खेलिरहेका हुन्थे । सबै शान्त थियो ।
सिमकोट बजारको खाल्डाखुल्डी बाटोमा चामल बोकेको एउटा ट्याक्टर धूवाँ उडाउँदै गुडिरहेको थियो । पानी नपर्दो हो त कति धूलो उड्थ्यो होला । केटाकेटीहरू गाडी हेरेर रमाइरहेका थिए । कोही गाडीको पछिपछि कुद्दै थिए । ६ वर्षअघि हुम्लाबाट नेपालगन्ज पुग्दा पहिलोपटक मैले गाडी देख्या थिएँ । जहाज चढ्दा डर लाग्या थिएन । बाफ्रे ∕ गाडी देखेर खुब डर लाग्यो । गाउँबाट आएकालाई सहरसँग अजिबको डर हुँदोरहेछ ।
रानीवनबाट हेर्दा पूरै सिमकोट बजार छर्लंग देखिन्छ । उहिले अन्नबाली उम्रिने जग्गामा अहिले घरैघर उम्रिएका छन् । फापर, चिनु, मर्सी, कागुनी, आदि फल्दा–फुल्दा सिंगै सिमकोट बजार अनेकन रङका फूलहरूको एउटा फूलबारी लाग्थ्यो । अहिले पनि सिमकोट बजार हराभरा छ, रंगी देखिन्छ । तर फापर, चिनुको ठाउँमा घरहरू उभिएका छन् । फरकफरक रङका जस्तापाताहरू जताततै टल्किएका छन् । अहिलेको सिमकोटबाट उहिलेको सिमकोट लगभग हराइसकेको छ । सिमकोट नितान्त भिन्नै भएको छ ।
सिमकोट बजारलाई एक फन्को मारेर दुइटा झोला बोकेर म सरासर गाउँतिर लागें । लगभग पाँच घण्टाको उकालो–ओरालो बाटो । आमाले पहिले नै भनेकी थिइन्, ‘बाटोमा फोटो खिच्दै नबस्, छिट्छटो आइज । मोटर बाटो बनाइरहेको ठाउँबाट ढुंगा खस्छ ।’ नभन्दै बाटो निकै नराम्रो थियो । बाटो फराकिलो बनाउँदा ठाउँठाउँमा रूखहरू काटिएका थिए । पहिले च्याखुरा, डाँफेको संगीतमय आवाजसँगै उकालो–ओरालो बाटो पार गर्‍थ्यौं । अहिले गाडीको कर्कस आवाज मात्रै सुनिन्छ, पूरै जंगलमा । गाडीको कर्कश आवाजसँग तर्सेर च्याखुरा, कालिज र डाँफेजस्ता चराहरू पनि टाढा–टाढा गइगए । कत्ति घोडा जोपा लोटे (लडे) । गाडीको बाटो बनाउने ठाउँबाट खसेको ढुंगाले गाईगोरु, घोडा हिँड्ने बाटो बन्द भएको थियो । रूखहरू काटिएका नांगा डाँडा शोकमग्न देखिन्थे ।
हिल्सा–सिमकोट हिँड्ने पैदल रुटमा यही हो । तर, बाटोमा खासै मान्ठा भेटिएन । पैदल रुटमा पर्ने होटलका साहुजीहरू कोही त आउला भन्ने आशा बोकेर ढुकिबसेका थिए । पानीनौला शाही होटलका साहुजीको निन्याउरो अनुहार मलाई देखेर उज्यालो भयो । पानीनौलाको चिसो पानीको गिलास मेरो हातमा थमाउँदै उनले भने, ‘हब्री (माथि) बाट बाटो बनिगो । अब यो बाटो भएर कोही हिँड्दैनन् । गाडी गुड्न थालेदेखि सबैको भाउ बढ्या छ । हामी गरिबले महँगो ठाउँमा जग्गा किनेर होटल बनाउन सक्दैनौं । तैपनि कोही पाहुना आइजाला कि भनेर ढुकिबस्या छौं ।’ उनका लागि यही होटल सबथोक हो । यहीँको कमाइले छकलबाहाको छाक टार्नु छ, बच्चाहरूलाई पढाउनु छ ।
सिमकोट लाक्नाबाट उँधो सिमकोटतिर फर्केर सुल्पा तानिरहेका बाजेले पनि नाकबाट धूवाँ निकाल्दै भनेका थिए, ‘क्या गर्नु त भाउवा ∕ विकास त भयो तर धनीहरूका लागि । बाटो बन्यो । गाडी गुड्न थाल्यो । बजारमा घरहरू बने । जताततै बजार बन्न थाल्यो । धेरै जग्गाजमिन हुने धनीहरू जग्गा बेचेर झन् धनी भैग्या । हामी गरिब झन्–झन् गरिब भैगयौं । पहिले यही बाटो भएर गधा, खच्चडमा ढुंगा ओसार्‍थ्यौं । कुइरेको झोला हिल्सा पुर्‍याउँथ्यौं । हिल्साबाट सामान ढुवानी ल्याउँथ्यौं । सकेजति पसिना बगाउँथ्यौं, भोको पेट भरिन्थ्यो । अहिले काम पाइँदैन, कामै नभएपछि रित्तो पेट रित्तै हुनेभैग्या । धेरै मान्ठले गर्ने काम एउटै गाडीले एकैछिनमा गरिदिन्छ । आफ्नो खेतमा फलेको अन्नले खाना पुग्दैन । अब हामी गरिबहरूको काम खोसियो ।’ विकास सबैको बराबर नहुँदो रहेछ । उनको कुरा निकै कहालीलाग्दो सुनिन्थ्यो । कुनै समय उनले पनि सडक बनेको सपना देखे होलान् । गाडी चढेर सरर घुमेको कल्पना गरे होलान् । तर, अहिले उनको आँखामा कुनै सपना र कल्पना बाँकी थिएन ।
म गाउँ पुग्दा रात परिसकेको थियो । बिजुली नपुगेको मेरो गाउँ साँझसँगै निदाइसकेजस्तो लाग्थ्यो । एकदम चुपचाप र सुनसान थियो । परबाट आफ्नो गाउँलाई धीत मरुन्जेल हेर्ने इच्छा रातले निलिदियो । बिहानै उठेर थाराबाट गाउँ हेरें । गाउँ पनि केही भिन्नै भैसकेको थियो । भोजपत्र र माटोले छाएको चिटिक्क घरहरूको बीचमा आठ, नौ घर नीलो, रातो टिनले छाएका थिए । बर्खायाममा पानी नचुहिने र हिउँदमा हिउँ फाल्न नपर्ने भए पनि टिनले छाएका घरहरूले सुन्दर गाउँ कुरूप देखिएको थियो । आफ्नो मौलिकता, आफ्नोपन गुमाइरहेको गाउँ न गाउँजस्तो देखिन्थ्यो, न सहरजस्तो । हावाको लयमा नाच्ने लुङ्दार र लटरम्म फलेको स्याउ, पाक्दै गरेको फापर, चिनु, लरे, सिमी आदिले भने वातावरण रंगीचंगी बनाएको थियो । उहिले हजुरआमाले सुनाउने टुङ (कथा) मा वर्णन गरिएको स्वर्गजस्तै लाग्थ्यो ।
हाम्रोतिर लामो समयपछि बाहिरबाट आएका मान्ठहरूलाई सबैले पाहुना बोलाउने चलन छ । एक जना भाउजूले उनको घरमा बोलाइन् । सफा घर, धोएर मिलाएर राखेका भाँडाकुँडाहरू टन्नै थियो । तर, उनले पुरानो कराईमा पानी उमालेर चिया बनाइन् । अचम्म लाग्यो, यत्तिका राम्रा भाँडाहरू छाडेर उनले किन कराईमा पानी उमालिन् ? ती भाउजूले धोएको सेतो भाँडोमा मोसो लाग्छ भनेर पुरानो कराईमा पानी उमालेकी रहिछन् । उनले सहरको जस्तो सेतो भाँडा सजाएकी रे । आमाले भनेपछि पो थाहा भयो । गाउँमा यत्तिसम्म सहरको प्रभाव परेको रहेछ ।
बाटो बनाउँदा ब्लास्टिङ गरेको आवाजले तर्सेर उँभो हिमाल चढेका थिए बाँदरहरू । गाउँमा देखिने बाँदर खर्कमा भेटिए । खर्क जाँदा मसँग चार जना ११ र १२ वर्षका भाइबहिनीहरू थिए । भीरको बाटो एकदमै नराम्रो थियो । त्यो भीरबाट लोट्यो भने बाँच्ने आसै थिएन । ‘हामी एक–एक गरेर लाइन लागेर हिँडौं,’ मैले भनें । बच्चाहरू को पहिले हिँड्ने भन्ने विषयमा झगडा गर्न थाले । झगडा गर्दागर्दै एउटाले भन्यो, ‘जो सबभन्दा धनी छ ऊ सबभन्दा अघि, जो गरिब छ ऊ सबभन्दा पछाडि हिँड्ने ।’ उसले यसो भन्नेबित्तिकै सबै जना एकपछि अर्को गर्दै चुपचाप लाइन लागे । म एकटकले हेरेको हेर्यै भएँ । सबैभन्दा अघि हिँडिरहेकी बहिनीतिर हेरेर सोधें, ‘ऊ कसरी सबैभन्दा धनी भयो ?’ ‘उसको घर सबैभन्दा ठूलो छ । खपु (झ्याल) पनि ठूल्ठूला छन्, नीलो कलर गरेको टिन हालेको छ नि त त्यसै ऊ सबैभन्दा धनी भयो ।’ बीचको एक जना बोल्यो । लाइनको अन्तिममा चुपचाप हिँडिरहेको भाइतिर देखाउँदै उसले थप्यो, ‘उसको घरमा टिन हालेको छैन्, खपु पनि सानासाना छन् । भाँडाकुँडा पनि सेतो छैन ।’
साना स्कुले भाइबहिनीको कुरा सुनेर छक्क परें । पहेँलो, नीलो जस्तापाताले छाएको घर र सहरको जस्तै मिलाएर राखेको भाँडाकुँडाले गाउँमा यो धनी त्यो गरिब भनेर वर्ग निर्माण गरेको थियो । समाजले निर्माण यो मानसिकताले स–साना भाइबहिनीलाई पनि गाँजेको छ । लामो समय टाढा बस्दा गाउँ यस्तो भयो होला, उस्तो भयो होला भन्ने जोकोहीलाई लाग्छ । पहिलेको गाउँ मगजका बसिरहेको हुन्छ । अझ भनौं आफ्नो गाउँभन्दा टाढा बस्नेहरूले गाउँको यादहरू साथ लिएर हिँड्छन् । वर्षौंदेखि आफूसँगै लिएर हिँडेको सुन्दर याद र कल्पनाहरू भत्किँदा नरमाइलो लाग्दोरहेछ । माटोले छाएको तीनतले घरले गरिबी होइन गाउँको आफ्नोपन, आफ्नो मौलिकता प्रतिविम्बित गर्छ । ती स–साना भाइबहिनीहरूलाई कसरी बुझाउनु ? कसरी सम्झाउनु ? मलाई पहिलोपटक आफ्नै गाउँ नरमाइलो लाग्यो ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ ११:२०